Mpitondra… tsy mampisy hasina fanjakana | NewsMada
Mpitondra… tsy mampisy hasina fanjakana
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao vao tena tsaroana sy imasoana ny amin’ny famerenana ny hasin’ny fahefam-panjakana. Tsy nahoana izay ela izay? Ny governemanta amin’izao no manao izany ho vaindohan-draharaha. Nahoana loatra àry no very ny hasin’ny fahefam-panjakana?
Tsy inona fa ny afitsoky ny mpitondra ihany no mahasoa na maharatsy amin’izay mahavery hasina azy izay: tsy misy hasina, na manana fahefana aza. Eo ny tsy fanajana sy tsy fanatanterahana ny teny nomena. Lasa tsy to teny ho azy: tsy eken’ny vahoaka izay lazainy, tsy azo antoka ho tanteraka.
Tsy vitan’ny hoe tsy atao izay lazaina, fa tsy lazaina koa izay atao. Tsy misy fangaraharana izay atao. Toy izany, ohatra, ny amin’ny tambin’ny fivarotan-tanindrazana, ny famelana ny vahiny handroba harem-pirenena… Manginy fotsiny ny tsikombakomba sy ny kolikoly avo lenta… mandeha ho azy.
Fototra sy miara-dalana amin’ireo ny tsy fanarahan-dalàna, mahatonga ny mpitondra sy ny fanjakana ho very hasina amin’ny vahoaka. Tsy afa-miala amin’izany ny mpitandro filaminana, ny mpitsara, ny solontenam-panjakana any ifotony… Tsy mahagaga ny firongatry ny fitsaram-bahoaka .
Ho azo antoka hahomby sy ho vita ary haharitra ve, ohatra, raha miainga any ifotony ny famerenana ny hasin’ny fahefam-panjakana amin’izao? Tsy hita tsinona izay mba hoe mpitondra ambony alain-tahaka amin’ny fanajan-dalàna, fanatanterahana ny teny nomena, fangaraharana amin’izay atao…
Tsy ny afitsoky ny mpitondra ambony aza ve no mahatonga ny any ifotony hanao izay danin’ny kibony… mahavery hasina ny fanjakana? Na tsy misy sahy mifampiteny sy tsy mifampahatahotra, fa samy manao ny ataony. Lasa tambajotran’ny fahalovana ho azy ny raharaha. Mifanafin-keloka tsinona!
Tena misy ve ny fitiavana sy finiavana hamerina ny hasin’ny tena… amin’ny maha mpitondra fanjakana? Eo ny vahoaka ifotony mahita sy mitsara amin’izay iainany isan’andro. Tsy izao fahaverezan’ny hasin’ny fahefam-panjakana sy ny mpitondra izao no ilàna fiovana sy fanovana, fanorenana ifotony…?